warkii.com » Indhaha lagama daboolan karo iskoorka Dil Bechara waxuuna youtube ku garaacay filimada Zero, Bigil, ilaa Avengers!!
Indhaha lagama daboolan karo iskoorka Dil Bechara waxuuna youtube ku garaacay filimada Zero, Bigil, ilaa Avengers!!
Inaba caadi ma ahan goos gooska Dil Bechara sida looga jeclaaday barta Youtube-ka iyo sida dadka usoo wada dhaweyeen waxuuna ka sare maray durba aflaam waaweyn oo mudo Youtube yaaleen waana iskoor weyn mudo 24-saac waxkayar.
Dil Bechara waxuu noqday goos gooska ugu Like-ta badan dhamaan filimada Youtube-ka inaba caadi ma ahan wax 24-saac ka yar waxaa Like saareen goos gooska dad sare udhaafayaan 5.9-Milyan qof waana wax aan horey loo arag mudo 24-saac kayar waliba.
Filimada goos gooskooda youtube laga daawadat ee Dil Bechara kusoo xigaan hoos kaga bogo iyo mid walba Viewska uu sameeyay ilaa hada:
Dil Bechara: 29-Milyan Views iyo 5.9-milyan Like (mudo 23-saacadood)
Bigil: 51-milyan Views iyo 2.3-milyan like (mudo 8-bilood)
Zero: 121-milyan Views iyo 2-milyan like (sanad iyo bar)
Avengers Endgame: 135-milyan Views iyo 2.9-milyan like (inka badan sanad).
Bal kawaran hal todobaad ama 24-july oo Dil Bechara la daawanaayo imisa Views ayuu sameeyn karaa imisa Like oo milyan ayuuna heli karaa ileen 23-saacadood ayuu iskoorkan kudhigay ciyaar ma ahan 29-milyan qof inee mudadan ku daawato kudhowaan 6-milyan qofna like saarto waa iskoor weyn.